संविधान दिवसको दीपावली तहसनहस पारिदिने लक्ष्मण थारुको चेतावनी ! || सुनौलो नेपाल
संविधान दिवसको दीपावली तहसनहस पारिदिने लक्ष्मण थारुको चेतावनी !
भदौ २५ काठमाडौं आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू पहिचानजनित मोर्चा समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय क्षेत्रीय मोर्चा घटकहरूले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
विविधतायुक्त नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको समेत मूल मर्म र भावनाविपरित बेइमानीपूर्वक जबर्जस्त रुपमा खुनी संविधान जारी भएकोले आफूहरुले संविधान दिवस नमनाउने उनीहरुको स्पष्टोक्ति थियो। संविधान संशोधन भएर आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले असोज ३ गते संविधानको दीपावली तहसनसह बनाइदिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले दीपावली गर्ने दिन कालो दिवसका रुपमा प्रदर्शन गर्ने भन्दै उनले भने सरकारले मनाउने असोज ३ गतेको संविधान दिवसको दीपावलीलाई हामी तहसनहस पार्छौं। थारुले अबको सिधासिधी लडाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकारसँग रहेको चेतावनी दिए। ओली सरकार दमनकारी बाटोतर्फ उन्मुख रहेको उनको टिप्पणी थियो। ओली सरकार देशलाई तहसनहस गराउने नियतका साथ अघि बढेको छ यो सरकारसँग हिम्मत र तागद छ भने आदिवासी जनजातिसँग सिधासिधी आएर लडे हुन्छ। हामी लड्न तयार छौं।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म आफूहरुले खुशीयाली नमनाउने बताए। संशोधनमार्फत यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ। सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म हामी खुशीयाली मनाउन सक्दैनौं। उनले संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने क्रममा राज्यले आफूहरुमाथि दमन गरे प्रतिकारमा उत्रिनेपनि चेतावनी दिए। शान्तिपूर्ण रुपमा संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँछौं। तर सरकार दमनकारी रुपमा प्रस्तुत भए हामी पनि बाध्य भएर जाईलाग्न तयार छौं। बरामले भने।
बुध, भदौ २५, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
अमेरिकाको डीभी लोटरी खुल्दै, पासपोर्ट पनि चाहिने !
असोज ५ काठमाडौं संयुक्त राज्य अमेरिकाले आगामी बर्षको लागि डीभी...